Olee Otú M Ga-esi Agwa Ndị Mụrụ M Okwu Gbasara Iwu Ndị Ha Nyere M? | Ndị Na-eto Eto Na-Ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kachin Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Maya Mongolian Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Roman) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba
“Mgbe m dị afọ iri na ise, m na-erubere iwu ndị mụrụ m nyere m isi, ma ugbu a m dị afọ iri na itoolu, m chere na m kwesịrị inwekwuru onwe m.”—Sylvia.
Ọ̀ dị gị otú ahụ ọ dị Sylvia? Ọ bụrụ otú ahụ, isiokwu a ga-enyere gị aka ka gị na ndị mụrụ gị kwuo gbasara ya.
Tupu gị agwa ndị mụrụ gị gbasara iwu ndị ha nyere gị, tụlee ihe ndị na-esonụ:
Ezigbo nsogbu ga-adị n’ụwa a ma a hapụ onye ọ bụla ka o mere otú masịrị ya. Chegodị otú ihe ga-adị n’okporo ụzọ awara awara nke na-enweghị iwu ọ bụla na-eduzi ndị ọkwọ ụgbọala, onye ọ bụla ana-agba otú masịrị ya. Otú ahụ iwu okporo ụzọ si eduzi ndị ọkwọ ụgbọala ka iwu ndị nne na nna mere si eme ka ihe na-aga nke ọma n’ụlọ ha.
Iwu ndị mụrụ gị nyere gị na-egosi na ha hụrụ gị n’anya. Ọ bụrụ na ha enyeghị gị iwu ọ bụla, o nwere ike ịbụ na ha achọghị ịma ihe ga-eme gị. O gosiri na ha abụghị ezigbo nne na nna.
Ị̀ MAARA? Ndị nne na nna nwekwara iwu ha na-erube isi na ya. Ọ bụrụ na ị maghị, gụọ Jenesis 2:24; Diuterọnọmi 6:6, 7; Ndị Efesọs 6:4; na 1 Timoti 5:8.
Ma, olee ihe i nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị ka chere na iwu ndị mụrụ gị nyere gị adịghị gị mma?
Tupu gị na ndị mụrụ gị ekwurịta gbasara iwu ndị ha nyere gị, chebara ihe ndị na-esonụ echiche. Ị̀ na-erubekarị isi n’iwu ndị mụrụ gị nyere gị? Ọ bụrụ na ị naghị erubekarị isi n’iwu ndị ha nyere gị, o nwere ike ịbụ na ugbu a abụghị oge i kwesịrị iji gwa ha ka ha mee ka i nwerekwuo onwe gị. N’ihi ya, gụọ isiokwu bụ́, “Olee Ihe M Ga-eme Ka Ndị Mụrụ M Na-atụkwasị M Obi?”
Ọ bụrụ na ị na-erubekarị isi n’iwu ndị mụrụ gị nyere gị, kwadebe ihe ị ga-achọ ịgwa ha. Tupu gị na ha ekwurịta ya, chebara ihe ị ga-achọ ịgwa ha echiche. I nwekwara ike ide ya ede. Ime otú ahụ ga-enyere gị aka ịmata ma ihe ị chọrọ ka ha meere gị ò kwesịrị ekwesị. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịgwa ndị mụrụ gị ka ha kwuo oge na ebe unu ga-anọ kwurịta okwu ahụ́ eruo unu ala. Buru ihe ndị na-esonụ n’obi mgbe gị na ha na-ekwurịta okwu:
Kwanyere ha ùgwù. Baịbụl kwuru, sị: “Okwu ọjọọ na-akpasu iwe.” (Ilu 15:1) N’ihi ya, buru ihe a n’uche: Ọ bụrụ na gị arụwa ndị mụrụ gị ụka ma ọ bụ kwuwe na iwu ndị ha nyere gị adịghị mma, mkparịta ụka unu agaghị aga nke ọma.
“Ka m na-akwanyekwuru ndị mụrụ m ùgwù, ka ha na-akwanyekwuru m ùgwù. Ọ bụrụ na anyị ana-akwanyere ibe anyị ùgwù, ọ ga-adịkwuru anyị mfe inwe otu olu.”—Bianca, ọ dị afọ iri na itoolu.
Gee ha ntị nke ọma. Baịbụl gwara anyị ka anyị ‘bụrụ ndị na-anụ ihe ngwa ngwa, ndị na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa.’ (Jems 1:19) Cheta na ọ bụ ndị mụrụ gị ka gị na ha na-ekwurịta okwu. Ọ pụtara na i kwesịkwara ige ha ntị, ọ bụghị naanị ịgwa ha okwu.
“Ka anyị na-eto, anyị nwere ike ịna-eche na anyị ma ihe karịa ndị mụrụ anyị, ma ọ bụghị eziokwu. Anyị kwesịrị ịna-eme ihe ndị ha gwara anyị.”—Devan, ọ dị afọ iri abụọ.
Chebakwara ndị mụrụ gị echiche. Gbalịa ghọta ihe ndị mụrụ gị kwuru mere ha ji nye gị iwu ndị ahụ. Mee ihe a Baịbụl kwuru. O kwuru, sị: “Na-elekwasị anya, ọ bụghị naanị n’ọdịmma onwe unu, kamakwa n’ọdịmma nke ndị ọzọ.” N’ihi ya, lekwasị anya n’ọdịmma ndị mụrụ gị.—Ndị Filipaị 2:4.
Olee nke n’ime ụzọ abụọ a i chere ga-eme ka ndị mụrụ gị nyekwuo gị ohere ime ihe ụfọdụ?
“M na-echebu na ndị mụrụ m kpọrọ m asị, nakwa na ha anaghị akwado m. Ma, emechaala m ghọta na ha na-agbalị ka ha bụrụ ezigbo nne na nna, otú mụnwa na-agba mbọ ịghọ dimkpa. Iwu ọ bụla ha nyere m bụ maka na ha hụrụ m n’anya.”—Joshua, ọ dị afọ iri abụọ na otu.
Kwuo ihe ọzọ i nwere ike ime. Ka e were ya na e nwere otu oriri na nkwari ị chọrọ ịga. Ma ọ ga-ewe gị otu awa iji rute ebe a ga-anọ enwe ya. Gị agwa ya ndị mụrụ gị, ha ajụ. Chọpụta ihe mere ha ji jụ. Ihe mere ha ji jụ, ọ̀ bụ n’ihi na ebe a ga-anọ enwe ya dị anya, ka ọ̀ bụ oriri na nkwari ahụ?
Ọ bụrụ na ihe mere ha ji jụ bụ n’ihi na ha achọghị ka ị nyaa ụgbọala, hà ga-ekwe ka ị gaa ma ị gwa ha ka gị na onye bụ́ aka ochie n’ịnya ụgbọala soro?
Ọ bụrụ na ihe mere ha ji jụ bụ n’ihi oriri na nkwari ahụ, hà ga-ekwe gị gaa ma ị gwa ha ndị ga-abịa ya na onye ga-ahazi ya?
Cheta na i kwesịrị ịkwanyere ndị mụrụ gị ùgwù mgbe ị na-agwa ha okwu ma jiri ndidi gee ntị n’ihe ha na-agwa gị. Gosi na ị ‘na-asọpụrụ nna gị na nne gị’ ma n’ihe ị na-ekwu ma n’àgwà gị. (Ndị Efesọs 6:2, 3) Hà ga-agbanwenụ obi ha? Ha nwere ike ịgbanwe obi ha ma ọ bụ ghara ịgbanwe ya. Nke ọ bụla ọ bụ, megodị ihe ndị na-esonụ . . .
Jiri obi gị niile kweta ime ihe ndị mụrụ gị kwuru. Ụfọdụ ndị na-eto eto amaghị na iji obi ha niile kweta ime ihe ndị mụrụ ha kwuru ga-eme ka ha nyekwuo ha ohere ime ihe ha chọrọ. Ọ bụrụ na gị na ha arụwa ụka n’ihi na ha ekweghị eme ihe ị gwara ha, mgbe ọzọ gị na ha ga-ekwurịta okwu, ọ ga-esikwuru ha ike ikwe ka i nwerekwuo onwe gị. Ma ọ bụrụ na i jiri obi gị niile kweta ime ihe ndị mụrụ gị kwuru, ha nwere ike ikwe ka i nwerekwuo onwe gị.
Ihe ndị na-eto eto ibe gị kwuru.
“Amụtara m na m meda obi gwa ndị mụrụ m otú obi dị m, ha na-egekarị m ntị. Ha na-agwa m ihe mere ha ji mee mkpebi ndị ahụ ma ọ bụ ha agwa m ihe ọzọ m ga-eme. Obi na-atọ ndị nne na nna ụtọ ma ha na ụmụ ha meda obi kwurịta okwu kama onye ọ bụla ịbara ibe ya mba ma jiri iwe pụọ.”—Devan.
“O were m oge tupu mụ amụta iji nwayọọ agwa ndị mụrụ m otú obi dị m. Mgbe m bidoro mewe ya, o mere ka ha ghara ịna-aghọtahie m mgbe niile. Ọ bụrụ na ha aghọtahie m, anyị iji nwayọọ kwurịta okwu na-eme ka udo dịrị, ọ bụrụgodị na anyị ekwetaghị ihe ibe anyị kwuru.”—Joseph.
Chebara Iwu E Nyere Gị Echiche
KATUUN E SERE NA BỌỌDỤ
Olee Otú M Ga-esi Akọrọ Ndị Mụrụ M Obi M?
Olee otú i nwere ike isi kọọrọ ndị mụrụ gị obi gị, ọ bụrụgodị na ọ dịghị gị nke ikwu okwu?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Otú M Ga-esi Agwa Ndị Mụrụ M Okwu Gbasara Iwu Ndị Ha Nyere M?
ijwyp isiokwu 85